Farqiga Semalt: Tan ugu sarreysa Google iyo wixii ka dambeeya
Way adkaan kartaa in si gaar ah loogu sheego hay'adaha suuq geynta.
Markay muuqato, dhammaantood waxay kufiican yihiin suuqgeynta laftooda. Markay dhamaantood samaynayaan sheegashooyin la yaab leh — isku meherad ku samee indhahaaga hortiisa, sii iibso iibkaaga , ka qayb gal macaamiishaada - sidee ayaad u ogtahay meesha aad adeegsanayso, iyo mid aad iska indhatireyso?
Si loo fahmo sida loo kala saaro qamadiga iyo moofada , bal aan eegno hay'ad xirmooyin buuxisa oo wax sax ah sameyneysa: Semalt.
Semalt waa adeeg SEO iyo adeeg suuq geyn ah oo la aasaasay 2013. Shirkaddu waa hay'ad xirmooyin oo dhammaystiran, taasoo la micno ah inay gaarsiin karto olole suuq geyn oo dhammaystiran bilow ilaa dhammaad. Waxay leedahay awood gaar ah oo ku saabsan dhinacyada SEO iyo falanqaynta, halkaas oo ay ku bixiso dhowr adeegyo gaar ah.
Sanadihii la aasaasay, Semalt wuxuu ku koray quwad suuq geyn oo caalami ah. Markii la falanqeeyay ku dhawaad 1.5 milyan oo goobood isla markaana lagu faano 600,000 oo isticmaaleyaal ah, Semalt waxay si dhakhso leh u noqotay hogaamiyaha barta SEO iyo suuq geynta mana muujineyso calaamado muujinaya hoos u dhac. Wakaaladda waxaa hogaaminaya koox karti u leh hal abuurka iyo takhasuslayaasha, kuwaas oo aad kula kulmi karto halkan!
"Taasi waa wax wanaagsan oo waa wanaagsan tahay," waxaad dhihi kartaa, "laakiin sidee baan ku ogaanayaa in Semalt uu u qalmo waqtigayga iyo lacagtaba?" Si aan uga jawaabno su'aashan waxaan u baahan nahay inaan si dhow u eegno adeegyadeeda.
Maxuu bixiyaa wakaaladu marka loo eego adeegyada SEO? Waa inaad si dhakhso ah uga feejignaataa shirkad kasta oo suuq geynaysa oo adduunka u ballanqaadeysa, ama aad uga warwarsan tahay sida saxda ah ee adeegyadooda SEO ay u shaqeeyaan, maadaama tani ay calaamad u tahay inay iska indho indheeyaan ama ay khiyaameeyaan nidaamka si ay u bixiyaan natiijooyin dhakhso leh laakiin waqti-gaaban. .
Xaaladda Semalt, shirkaddu waxay bixisaa saddex adeegyo SEO oo kala duwan: AutoSEO, FullSEO iyo E-Commerce SEO, waxayna galaan faahfaahin si ku saabsan shaqooyinka gudaha mid kasta.
Kaamil ah qofkasta oo raadinaya inuu suulashooda ku xidho dunida SEO, AutoSEO waxay siisaa milkiilayaasha ganacsiga soo bandhigid deg deg ah, fudud oo wax ku ool ah kor u qaadista mashiinka raadinta. Waxaa:
Falanqaynta bartaada internetka
Waxay soo jeedineysaa hagaajin
Wuxuu xushaa ereyada furaha ah
Wuxuu ku darayaa xiriiriyeyaasha
Waxay soo gudbisaa warbixinno joogto ah
Oo waxaas oo dhan ayay u sameyneysaa wax ka yar $ 0.99 !
Kuwa doonaya inay arkaan natiijooyinka dhabta ah iyo kuwa muddada dheer jira, ma jiraan wax isbarbar dhigaya taabashada aadanaha, taasina waa dhab ahaan waxa xirmada Semalt ee FullSEO ay bixiso. Hel falanqayn qoto dheer, kobcinta iyo kaalmaynta koox khabiiro ah oo kordhay taraafikada websaydhka ee 177 dal oo kala duwan. Haddii aad rabto guul guul mashiin raadinta dhabta ah, waxaad dooneysaa FullSEO.
Websaydhyada e-commerce-ku waxay bixiyaan caqabad yar oo ka duwan kan websaydhada oo aan si firfircoon uga iibin internetka. Semalt's E-Commerce SEO ayaa loo dhisay inay wax ka qabato su'aalaha qaaska ah ee laga helo iibinta badeecadaha iyo adeegyada internetka, iyadoo lagu bartilmaameedsanayo weydiimaha macaamilka iyo ereyada furaha ah ee tirada yar ee aad gaarka u leedahay, iyadoo sidaas lagu helayo macaamiisha gaarka ah ee aad raadineyso.
Semalt iyo falanqaynta
Aqoontu waa awood. Waxaad kaliya garaaci kartaa tartamayaashaada waxaadna hogaamin kartaa suuqa haddii aad fahanto tartamayaashaada iyo suuqa. Hay'ad dhammeystiran ayaa bixin doonta adeeg gorfayn dhammaystiran oo shirkaddaada siisa dhammaan macluumaadka ay ugu baahan tahay inay ku guuleysato.
Falanqaynta Semalt waxay kuu oggolaaneysaa inaad dhisto sawir buuxa oo ku saabsan booskaaga suuqa. Waxaa:
Sida adiga iyo tartamayaashaad u fulinaysaan
Muujinaya isbeddelada suuqa ee kaa caawin doona inaad horumar gaarto
Waxay abuurtaa aragtiyo kaa caawin doona inaad ogaato suuqyo cusub.
Waxay dhistaa meel aad ka heli karto macluumaad aad ka abuuri karto istaraatijiyad ganacsi oo dhameystiran.
Raadinta sharci ahaansho
Ka dib markaad xaqiijiso taariikhda wakaaladda suuq geynta, aad hubiso inay si buuxda u furan yihiin, oo aad hubisay inay bixiyaan hal-abuurnimo, tayo leh, adeegyo la xaqiijiyay oo ay tahay inay shirkad hoggaaminaysa ay tahay, inay tahay waqtigii loo qaadi lahaa dadkii badnaa. Ma jiro hab ka wanaagsan oo lagu hubiyo tayada qofka aad suuq geyneyso ee aan ka ahayn dhegeysiga kuwa iyaga horay ula macaamilay.
Daraasadaha kiisku waa hab weyn oo lagu hubiyo sida saxda ah ee ay wakaaladda u shaqeyso, iyo waxaad filan karto haddii aad ka faa'iideysato adeegyadooda. Semalt waxaa kujira daraasiin daraasado kiis ah oo kujira boggeeda internetka, iyagoo ku siinaya inaad ku aragto labadaba shaqadooda iyo natiijadooda.
Waxaa jira hab fudud oo lagu hubiyo sharcinnimada wakaalad: ku bood khadka tooska ah oo eeg waxa shabakadda adduunka oo dhami ay leedahay. Thanks to xorriyadda macluumaadka ee ay bixiso internetka, hadda muhiimad ahaan waa macquul in shirkaddu qariso xaqiiqda ah in ay ka gaabinayso jidadka gaagaaban ama ayan ka bixin ballanqaadyadii.
Fiiri dib-u-eegista wakaaladda Google iyo Facebook. Haddii, sida Semalt, ay leeyihiin dhibcaha dib u eegista Google ee 4.5 / 5 iyo dhibcaha dib u eegista Facebook ee 4.9 / 5 (oo ay la socdaan 170,000 raaca) , waxaad ku kalsoonaan kartaa inay yihiin xulasho weyn. Semalt wuxuu sidoo kale ku bixiyaa boqolaal marag ah oo qoraal iyo muuqaal ah oo ku yaal boggeeda, kaas oo ka caawiya macaamiisha mustaqbalka inay fahmaan sida saxda ah ee ay shirkaddu ula shaqeyso.
Waxoogaa shaqsiyad ah
Waxa ugu fudud ee kaa caawin kara inaad kala tagto hay'adaha ugu wanaagsan iyo inta hartay waa la-cusboonaysiin. Waxaad dooneysaa inaad ogaato inaad la macaamilayso dad dhab ah oo ku fahmi doona, oo runtiina ku farxi doona inaad la shaqeyso. Haddii hay'addu muujiso dhinaceeda madadaalo, taasi waa astaan weyn.
Qaado Semalt's mascot office, Turbo the Turtle, tusaale ahaan. Wuxuu qayb ka noqday kooxdii Semalt markii ay u guureen xafiis cusub 2014, halkaas oo kiraystihii hore uga tegey isaga. Hadda wuxuu ku raaxeystaa nolosha aquarium weyn, xitaa wuxuu leeyahay muuqaal shaqaale oo u gaar ah (waa wareyste qoraa).
Isku soo wada duuboo, Semalt wuxuu bixiyaa qaabeynta ugufiican ee waxa laga raadin karo shirkad buuxda oo SEO ah iyo hay'ad suuq geyn. Waxay bixisaa isku-duwaansho buuxa oo adeegyo cusub, sifiican dib-u-eegis loo sameeyay, waxay leedahay diiwaan raad-raac oo la xaqiijiyay, waxayna ku siisaa dhammaan faa'iidooyinkaas qiimo qiimo leh.
Waxaa intaa dheer, inaad la shaqeysay shirkadaha ku dhowaad waddan kasta oo adduunka ah, waxaad ku kalsoonaan kartaa in Semalt uu ku hadlayo afkaaga hooyo! Kooxda Semalt waxay si fiican ugu yaqaan Ingiriis, Faransiis, Talyaani, Turki, Yukreeniyaan, Ruush iyo luqado kale oo badan.
Marka, haddii aad raadineyso hay'ad kaa caawin karta helitaanka meheraddaada halka ay u baahan tahay inay aadaan, maxaanad u dooran Semalt?